महानगर उत्रियो— मापदण्ड मिचिएका र नक्सा पास नभएका घरहरु भत्काइने !
पुसभित्र बनेको घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन सकिने
| 2016-11-17 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । महानगर क्षेत्र भित्र नयाँ घर बनाएका तर पुरानै नियम अनुसरा भए पनि नयाँ नियमका कारण घर सम्मपन्नता प्रमाणपत्र नलिएकाहरुका नाउँमा महानगर पालिकाले पुसभित्र प्रमाण पत्र लिन सूचना जारी गरेको छ ।
यदि घर बनाएको तर प्रमाण पत्र नलिएको हुनुहुन्छ भने, बेलैमा प्रक्रिया पुराएर प्रमाणपत्र लिन महानगरले आग्रह गरेको हो । काठमाडौ. महानगरपालिकाका अनुसार आउँदो पुससम्मको समय तोकिएको छ ।
यस अवधि भित्र प्रमाणपत्र नलिए कारबाही गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
नक्सा पास नगरी बनाइएका घर तथा संरचनाको पनि यही समयभित्र अनिवार्य रुपमा नक्सापास गराएर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने उसले बताएको हो ।
बिहीबार सूचना जारी गर्दै पुसभित्र निर्माण सम्पन्न्न भएको प्रमाणपत्र नलिनेहरुलाई दुई महिनाको समय सीमा दिएको हो । उसले भनेको छ- ‘तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा निर्माण प्रमाणित नगरे स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ ।’
जस अनुसार घर बनेको एक वर्षभित्र प्रमाणपत्र लिनु पर्ने र त्यसका लागि महानगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरेको हुनुपर्छ । तर, महानगरपालिकाले सूचना जारी गरे पनि आफू खुसी घर बनाउनेको संख्या बढी भएपछि भएपछि प्रमाणपत्र दिनेबारे महानगरपालिका पनि समस्यामा रहेको छ ।
महानगर भित्र ८० प्रतिशत मापदण्ड विपरीत घर
भूकम्प लगत्तै निर्माण मिडियाले गरेको सर्वेक्षणले महानगरपालिका भित्र झन्डै ८० प्रतिशत घरहरु मापदण्ड विपरीत रहेको डाटा अनुसन्धान गरेको थियो, जुन अनुसन्धान सामग्री निर्माण बिम्ब राष्ट्रिय मासिकमा प्रकाशित पनि गरिएको थियो ।
महानगरपालिकाका अनुसार पनि ८० प्रतिशत घर मापदण्ड मिचेर बनेको महानगरको अनुमान छ । मापदण्ड अनुसार प्रमाणपत्रका लिनका लागि गरिएको अनुरोध अटेर गरे टोली नै खटाएर विवरण संकलन गर्नेदेखि भत्काउने काम गर्ने उसको चेतावनी छ ।
महानगरले बताए अनुसार नक्साभन्दा फरक गरेर बनाइएका, नक्सा नै पास नगरिएका, सार्वजनिक जग्गा मिचिएका, नक्साभन्दा बढी तला र संरचना थपेका लगायतका सबै घरको विवरण संकलन गरिनेछ ।
मापदण्डभित्र रहेकालाई नक्सा प्रमाणित गरिनेछ भने अन्यलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सम्पन्नता नलिए धारो बत्ती समेत नदिइने
महानगरले दिएको चेतावनी अनुसार घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणित नभएको घरहरुलाई महानगरले तोकेबमोजिम सेवाग्राहीले पाउने सेवा पनि कटौती गर्ने तयारी छ । प्रमाणपत्र नबुझ्नेहरुको महानगरपालिकाबाट हुने सबै किसिमका सिफारिस रोक्ने योजना बनाइएको छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घर बैंकमा धितो राखी ऋण लिन नपाइने, हकदाबी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै घरको बेचबिखन गर्न नपाइने मात्र हैन, धारा र बत्ती जडान गर्न महानगरले सिफारिस समेत गर्दैन । महानगरले अघिल्लो वर्षको असोजदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
पहिले पहिले मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेको संख्या बढी भएको तर भूकम्पपछि भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणप्रत्र लिनेको संख्या केही बढेको महानगरको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच सय ४३ वटा घरको मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी भएको थियो ।
बितेको आर्थिक वर्षमा भने एक हजार ४ सय ९२ जनाले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
यस्तो छ महानगरको सूचना—
२ मंसिर, ०७३